Myanmar Monk Student Association: ကျောက်ကွင်းဝါဒပြိုင်ပွဲ (၉)
၁၂၉၈ ခု၊ ကဆုန်လဆန်း(၄)ရက်၊ ၁၉၃၆ ခု၊ ဧပြီ (၂၃)ရက် ၊ ကြာသပတေးနေ့၊ ထိုနေ့ကား
ရက်ပေါင်းများစွာ သောကရောက်နေရရှာသော အလိုတော်ရ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးအဖို့ သောကထွက်ပြေးဘ၀င်အေးရမည့် နေ့ ဖြစ်ပေသည် ။
အာလံ(ယခုအောင်လံ)မြို့၊ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်း ကျောင်းအုပ်ဆရာတော်ကလေး
အရှင်မဟာနန္ဒသည် ၀က်ထီးကန်သို့ ကိစ္စတစ်ခုအတွက် ဆိုက်ရောက်လာသည်၊ ၀ါဒယှဉ်ပြိုင်ပွဲကို ကြားသိပြီးဖြစ်သဖြင့် အခြေအနေကို စနည်းနာကြည့်ရာ မရေရာသော အဖြေကိုသာ ရရှိသဖြင့် သတင်းအတိအကျသိရှိလိုသဖြင့် အလိုတော်ရကျောင်းသို့ လာခဲ့သည်။ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးမှာ မူလကပင် ဆရာတပည့်ပမာရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး ဖြစ်သဖြင့် အခြေအနေကို မေးမြန်းလျှောက်ထားကြည့်ရာ ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောမည့်ပုဂ္ဂိုလ်မရရှိသေးသည့်အကြောင်း သိရှိရလေတော့သည်။
“တပည့်တော်က ဦးဉေယျ ကိုယ်တော်ကြီး ခေါင်းဆောင် ဟောပြောမယ်၊ မန္တလေးနှင့်ပခုက္ကူက
ကိုယ်တော် တွေလည်း ပါမယ်ဆိုတာနဲ့ အေးနေတာဘုရား။ အခုဒီရောက်မှပဲဘယ်သူမှမလာတော့
ဆရာတော်ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ သိရတာပါဘုရား” “……အဒဲီမောင်ဉေယျတို့ မန္တလေး,
ပခုက္ကူတို့အကြောင်း မပြောချင်တော့ဘူး မောင်နန္ဒရယ်၊ ရက်ကလည်း နီးလှပြီ၊ အဲဒါ မောင်နန္ဒ ကူညီနိုင်တယ်မဟုတ်လားကွယ်”၊
“မှန်ပါ ကူညီနိင်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တပည့်တော် ကိုယ်တိုင်တော့ ၀င်ရောက်ဟောပြောမှာ
“ဘယ်လိုလည်းဟဲ့ မောင်နန္ဒရဲ့ မောင်ပဇင်းဟာက ကူညီနိုင်တယ်လည်း ဆိုသေးရဲ့ ရှင်းအောင်
“တပည့်တော်ထက် တော်တဲ့ တပည့်တော်ရဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါး ရှိပါတယ်ဘုရား” “ဘယ်သူတုန်းကွဲ့၊
ဘယ်မြို့ကလဲ” “မှန်ပါ……တောင်တွင်းကြီးမြို့ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်း ကျောင်းအုပ်ဆရာတော်
“အော် …..တောင်တွင်းကြီးကိုး…….အနို့ သိက္ခာဝါ ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကွယ့်…မောင်နန္ဒရဲ့ …
“သိက္ခာဝါ (၂၀) မပြည့်သေးပါဘုရား …..ဒီနှစ်လောက်မှ ပြည့်မယ်ထင်ပါတယ်၊ အသက် (၃၉)နှစ်လောက်
“စာပေ ပရိယတ္တိဘက်ကကောကွယ့်”၊ “အသက်မကြီးပေမယ့် ပညာဂုဏ်တော့ မငယ်ပါဘုရား၊
၀ိသုဒ္ဓါရုံတိုက် ထွက်ပါ ကိုယ်ရင်ဘ၀ကပဲ ပိဋကတ်သင်ရိုး ကုန်ပြီးတော့ ရဟန်းတစ်ဝါအရမှာ
“ပါဠိတော်တွေနှင့် အဋ္ဌကထာကြီးတွေကော နိုင်နင်းရဲ့လား….. အဒဲါက အရေးကြီးတယ်ကွယ”့် ၊ “မှန်ပ….
ပါဠိတော်၊အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာ၊ အနုမဓုယောဇနာဂဏ္ဍိအား အဓိပ္ပါယ်အကောက်အယူ၊ စုတ်စောဒနာ၊ သောဓနာနည်းလေးဆယ်၊ သံဝဏ္ဏနာ၊ ဉတ်ကောက၊် ဥပစာဆယ်ပါး၊ နေတ္တိနည်းအားလုံးကိုပဲနိုင်နင်းကျွမ်းကျင်လှပါတယ်ဘုရား”။
“အင်…ဒီလိုဆိုရင်.. ပိဋကတ်အရာတော့ ကျမ်းဂန်စွယ်စုံ မှုံသောက်မာတင် ပညာရှင်ကလေးပဲကွယ့်….
“မှန်ပါ……… ကုလားဖြူစာ အင်္ဂလိပ်စာသာမက သက္ကဋဘာသာ, ဟန္ဒီဘာသာ, ဘင်္ဂါလီ,
နာဂရီဘာသာ, အူရဒူဘာသာစတဲ့ ဘာသာစာပေ စကားများလည်း ဆရာတစ်ဆူ ပါရဂူရောက်တတ်
မြောက်ကျွမ်းကျင် ပါတယ်ဘုရား၊ အနောက်ဘက် မဇ္မျိမဒေသ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ (၇)ခုနှစ်ကျော် နေပြီး၊
ဆရာမျိုးစုံထံမှ သင်ယူခဲ့ တာပါဘုရား”….. သာဓု …..သာဓု ၀မ်းမြောက်ပါဘိတော့ မောင်နန္ဒရယ်၊
အနို့….သူတို့ရဲ့ စာဖြူဘာသာကျမ်းတွေကော နိင်နင်းရဲ့လားကွယ့်” “မှန်ပါ…စာဖြူဘာသာကျမ်းစာ
ဖြစ်တဲ့ သမ္မာကျမ်းတွေတင်မကဘဲပသီဘာသာ၊ ကိုရ်ရန်ကျမ်းနှင့် ဟိန္ဒူဘာသာ မဟာဘာရတ-စတဲ့
ကျမ်းကြီးတွေကိုပါ တတ်မြောက်နိုင်နင်းပါတယ်ဘုရား၊ အန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဘာသာပေါင်းစုံဟောပြော ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်း ၀င်ရောက်ဟော ပြောဆွေးနွေးခဲ့သူပါဘုရား၊ ဆရာတော်ဘုရားကြီး သတိမထားမိ လို့ပါဘုရား၊လွန်ခဲ့တဲ့ ရှစ်နှစ်ကျော် ကိုးနှစ်လောက်က (လယ်တီတရားသတင်းစာကြီးထဲမှာ) ဗုဒ္ဓဘာသာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာ၊ ပသီဘာသာတွေရဲ့အကြောင်း ဆာင်းပါးရေးခဲ့ပါတယ်ဘုရား….အခုလည်း တိုးတက်ရေးမဂ္ဂဇင်း ထဲမှာ စာဖြူတို့ ပသီတို့နှင့် အပြိုငအ် ဆိုင်ဆောင်းပါးတွေရေးနေပါတယ်ဘုရား သူ့ကိုဘယ်သူမှ နိုင်အောင် မရေးနိုင်ပါဘုရား” “ဟာ….ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ ဒို့-ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်က အောင်ပွဲခံပြီဟေ့၊
၀မ်းသာလိုက်တာ မောင်နန္ဒရယ်…. အဲဒီကိုယ်တော်ဘွဲ့ ဘယ်သူကွယ့်”
“အေး….အေး …အဲဒီမောင်ဥက္ကဋ္ဌကို အမြန်ဆုံးသာရအောင် ပင့်ပေတော့ကွယ်၊ ဂိုဏ်းသံဃာများလည်း
မောင်မဟာနန္ဒကို လိုအပ်သမျှ အားလုံး အကူအညီပေးကြကွယ့် ကြားလား…..ကဲ ဟေ့ ငါ့ကိုဆွမ်းကပ်ကြစမ်း၊
ဒီနေ့  သိပ်ပြီး စိတ်ချမ်းသာတယ်ကွယ်… ဆွမ်းဘဥုးပေးတော့မယ်အခုမှပဲရင်ထဲက အလုံးကြီး ကျသွားတော့ သကွယ်…။
အရှင်မဟာနန္ဒ ရောက်ရှိလာသော သတင်းသည်, ဦးပဇင်း, ကိုရင,် ကျောင်းသားများမှ တစ်ဆင့် ပြန့်နှံ့သွားရာအလိုတော်ရရွာသာမက အနီးအနားရှိ ရွာများကပါ လူ/ရှင်/ရဟန်းးတို့ရောက်ရှိလာကြသဖြင့် အလိုတော်ရကျောင်းတွင် စည်ကားနေသည်။
အရှင်မဟာနန္ဒမှာလည်း ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဋ္ဌအကြောင်းပြောရ မေးသမျှဖြေရနှင့် တစ်နေ့လုံး
မနားရတော့ပေ။ ညဘက်တွင်လည်း ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး မေးမြန်းသမျှ ဖြေကြားရ၏။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးကား အရှင်ဥက္ကဋ္ဌကကဲ့သို့သော စွယ်စုံတိုက်စစ်မှူး တစ်ဦးကို ရရှိတော့မည်ဖြစ်၍ ၀မ်းသာရွှင်ပြနေလေသည်။ အရှင်မဟာနန္ဒသည် ၀ါဒပြိုင်ပွဲ စာချုပ်မူရင်းကို ကူးယူလိုက်ပြီး အိပ်ရာသို့ ၀င်ခဲ့သည်။
အမှာ။ ။ဤဘာသာရေးဟောပြောပွဲ စာတမ်းသည် တစ်ခေတ်တစ်ခါက မြန်မာပြည်မှာ တရားဝင်
တကယ်ဖြစပ်ျက်ခ့ေဲ သာ ဟောပြောပွဲ စာတမ်းဖြစပ်ါတယ်။
ရည်ရယ်ချက် ။ဤဟောပြောပစွဲာတမ်းကို တင်ရခြင်းသည် ဒီစာတမ်းကို လေ့လာဖတ်ရှုပြီး မိမိတို့
အနေနှင့် ရခလှဲတ့လဲ့ ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ်အရာကို မဆို သူများပါးစပ်ဖျားမှာ လမ်းမဆုံးစေပဲ ကိုင်ပိုင် စူစမ်းဆင်ချင် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ ဉာဏ်ရအောင် လုပ်ပြီး ဘာသာရေး လူမှုရေး အသိပညာတိုးပွားစေရန်
-----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတ္ထိ------------------------
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on Friday, 11 February 2011